किन यसरी सुनसान बन्दैछ हुलाक कार्यालय ? | NewsMissile.com
किन यसरी सुनसान बन्दैछ हुलाक कार्यालय ?
Newsmissile December 14, 2017 समाचार, सूचना-प्रविधी0Comment
भोजराज कार्की/सोलुखुम्बु । केहि वर्ष अगाडी मानिसको निक्कै भिड देखिने हुलाक कार्यालय हिजोआज सुनसान बेनेको छ । एक दशक अगाडीसम्म मोवाईल, इमेल इन्टरनेट नहुँदा खबर आदन प्रदानको मूख्य भरपर्दो सरकारी माध्यम हुलाक नै थियो ।
गाउँका मानिसहरु टोलमा हलकारा आएको जानकारी पाउँनसाथ कहि कतैबाट मेरो पत्र आएको छ कि ? भन्दै प्रश्न गर्थे । हलकारा त्यो बेला गाउँको प्रतिष्ठित व्यक्तिमा पर्थे तर आजभोलि कमैले वास्ता गर्ने उनीहरुको अनुभव छ ।
विगत २८ वर्षदेखि इलाका हुलाक कार्यालय लुक्लामा कार्यरत हलकारा तोया श्रेष्ठले भने, “पहिला सबैले चिन्थे, हामीलाई भेट्नेको भिडनै लाग्थ्यो तर आज भोलि कमैले वास्ता गर्छन ।” उनले भने, “एक दशक पहिलासम्म झोलाभरि चिठी पत्र नै पत्र हुन्थ्यो, गाउँगाउँमा पत्र वितरण गर्दाको मज्जा छुट्टै थियो तर आजभोलि घरैमा बसेर दिन बित्छ ।”
हुलाकीले समेत दैनिक डाक बोक्दा ठूलै झोला बोक्नु पथ्र्यो तर आज भोलि कुनै दिन झोला नै नबोकी जागिर खाने गरेको समेत उनीहरुसंग अनुभव छ । हुलाकी लेखनाथ कार्कीले भने, “चार कोष हिड्नु पर्छ, विगतमा दश केजीसम्म बोकिन्थ्यो तर अहिले औपचारीकता पूरा गर्न बाहेक अरु केहि छैन ।”
सूचना र प्रविधिको बिकाससंगै हुलाक कार्यालयको सेवा विस्तारमा ध्यान पुग्न नसक्दा अहिले हुलाक कार्यालयमा चहलपहल कम भएको बताईन्छ। हुलाक टिकट वितरण गर्ने, सरकारी पत्र पोष्ट गर्ने बाहेक कुनैपनि चिठिपत्र नआउने गरेको जिल्ला हुलाक कार्यालय सोलुखुम्बुमा सूचना अधिकारी संञ्जय राईले बताए।
पछिल्लो समय पाँच सय वाट क्षमतासम्मको एफ एम लाईसेन्स, इजाजत नविकरण, रोयल्टी बुझ्ने, लोकसेवा आयोगको राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी सम्मको राजस्व बुझ्ने लगाएतको जिम्मेवारी हुलाक कार्यालयलाई दिईएको छ ।
समय परिर्वतनसंगै हुलाक कार्यालयले ल्याएको अर्को सेवा टेलिसेन्टर पनि एक हो । प्रत्यक्ष सर्वसाधारण नागरिकलाई सेवा दिने उदेश्यले ल्याएको टेलिसेन्टर समेत केहि वर्षमै बन्द भएको छ ।
सर्वसाधारणको सूचना प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिसेन्टर सेवा व्यवस्थापन कम्जोर हुँदा प्रभावकारी बन्न सकेन। दक्ष कर्मचारीको अभाव र गुणस्तरहीन उपकरणका कारण टेलिसेन्टर सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् ।
फोटोकपी, लेमिनेशन, फ्याक्स, कम्प्युटर, प्रिन्ट, टेलिफोन, स्क्यानिङ र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि खोलिएका टेलिसेन्टर दक्ष कर्मचारी अभावकै कारण बन्द रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी सञ्जय राईले वताए ।
बजारमा टेलिसेन्टरले निर्धारण गरेको दर निजी क्षेत्रको भन्दा कम नहुनु, हिमाली जिल्ला भएकाले कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन नसक्नु, टेलिसेन्टर सबैको सेन्टरमा नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको हुलाक कार्यालयका सूचना अधिकारी राईले बताए ।
इलाका हुलाक कार्यालय नेले, इलाका हुलाक कार्यालय सोताङमा सञ्चालनमा रहेको टेलिसेन्टर सञ्चालनमा छ । यहाँ आंशिक आम्दानी भएपनि जिल्ला हुलाक कार्यालय, इलाका हुलाक कार्यालय नाम्चे र लुक्लामा सञ्चालनमा ल्याईएको टेलिसेन्टर पूर्ण रुपमा बन्द छ ।
समय अनुकुल टेलिसेन्टरको सेवा प्रभावकारी बनाउन माथिल्लो निकायले ध्यान नदिँदा टेलिसेन्टर बन्द हुुनु पुगेको कार्यालयको भनाई छ । २०६५ साल माघ २१ लुक्लामा टेलिसेन्टर सञ्चालमा ल्याएको भएपनि तीन वर्ष यता पूर्ण बन्द छ । त्यहाँ सुब्बा सहित ६ जनाको दर्वन्दी भएपनि अहिले एक हलकाराले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तै २०६४ सालमा इलाका हुलाक कार्यालय नाम्चेमा स्थापना भएको टेलिसेन्टर विगत पाँच वर्षयता बन्द छ त्यहाँ पनि सुब्बा सहित ६ जनाको दर्वन्दी भएपनि अहिले करारमा रहेका तीन जना हलकाराले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सूचना अधिकारी सञ्जय राईले भन्ने, “विगतको जस्तो चिठि पत्र पनि आउदैन मानिसको चहलपहल पनि कम, हुलाक कार्यालय सुनसान नै छ ।”
अहिले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा एक हुलाक अधिकृत, एक खरिदार, एक सहायक लेखापाल, २७ हुलाकी, ९ हलकारा कार्यारत छन् । ३५ हुलाकी, तीन सुब्बा ४ खरिदार, १५ हलकराको दर्वन्दी खालिरहेको पनि सूचना अधिकारी राईले बताए ।
Previous घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट
Nextशक्ति बाँडफाँडका विषयमा गम्भिर वार्ता